IPhone 13 -ka cusub wuxuu leeyahay laba taageero eSIM | Wararka IPhone
Kariim Hmeidan | 16/09/2021 19:00 | iPhone 13
Waxaan sii wadnaa inaan iska fogeyno dhammaan wararka ku saabsan noocyada cusub ee iPhone ee Apple noo soo bandhigtay Talaadadii la soo dhaafay. Qaar ka mid ah iPhone 13 cusub oo in kasta oo ay u muuqato inay yihiin moodel joogto ah ay keenaan horumarinno badan oo laga wada hadlay iyo qaar aan si tartiib tartiib ah u ogaanno. IPhone -kii hore ee XR iyo XS waxay soo bandhigeen taageero loogu talagalay eSIM, kaar dalwaddii ah oo noo oggolaanaya inaan isku mar adeegsanno laba lambar oo taleefan. Hadda iPhone 13 -ka cusub wuxuu noo keenayaa suurtagalnimada in la isticmaalo laba eSIM isku mar. Sii wad akhriska aan kuu sheegeyno dhammaan faahfaahinta.
Waa sidaas hawlwadeenno badan ayaa na siiya suurtagalnimada adeegsiga eSIM halkii laga isticmaali lahaa SIM (ama jir ahaan). Labada iPhone 13 iyo iPhone 13 Pro (iyo noocyada Mini iyo Max) hadda waxay oggolaadaan Dual SIM iyagoo adeegsanaya SIM caadi ah iyo eSIM, iyo Dual eSIM sida Apple ugu yeero. Wax noo oggolaan doona isticmaal laba eSIM isku mar. Maxay tani ka dhigan tahay? in haddii aan isticmaaleyno eSIM oo sabab kasta ha ahaatee aan u baahanahay lambar kale oo aysan na siin suurtagalnimada SIM caadi ah, waxaan ku rakibi karnaa eSIM kale iPhone -ka.
Wax muoo waxtar leh gaar ahaan markaan safrayno oo aan kiraysanno khadadka taleefanka cusub. Mararka qaarkood waxay naga dhigaan inaan sugno si aan u helno SIM iyo sidan wax walba si dhakhso ah ayey u socon lahaayeen haddii aan ku jirno xaaladda hore u lahaanshaha eSIM. Warar yar oo guud ahaan ka dhigaya iPhone 13 ikhtiyaar ay ku tixgeliyaan dhammaan kuwa ka fikiraya isbeddel. Xusuusnow in amarrada iPhone -kan cusub ee 13 uu bilaaban doono Jimcahaan, Sebtember 17 waxaadna bilaabi doontaa helitaankiisa Sebtember 24. Adiguna, ma qiimeyneysaa isbeddelka ku yimid iPhone 13? Maxaad u malaynaysaa warka ay Apple ku dartay iPhone 13?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » IPhone 13 -ka cusub wuxuu leeyahay laba taageero eSIM